ရဲထွန်း၏ မှတ်တမ်း: August 2012
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲသို့ ဦးတည်သော အုပ်ချုပ်ရေး အရွေ့စ ပြီ လား
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒုတိယ နှစ် ၀က် အတွင်းအနိုင်ရ ပြည် ခိုင် ဖြိုးပါတီ၏ တိုင်းဒေသကြီး တာဝန်ခံ များအနက် တစ်ဦးဖြစ်သော ဦးအောင်သိန်းလင်း အစား ဦးမောင်မောင်သိမ်းကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေ သ ကြီး တာ ၀န်ခံ အဖြစ် ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေး အပ်ခဲ့သည် ။
အနိုင်ရပါတီမှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အများစုဖြင့် စုဖွဲ့ ထားသော ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး များ နှင့် ဒုတိယ ၀န်ကြီးများ ကို ဌာနပြောင်း ခန့် အပ်တာဝန်ပေးခြင်း နှင့် ဒုတိယ၀န်ကြီး အသစ် များကို ပြောင်းလဲ ခန့် အပ် ခဲ့သည် ။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အတွင်းမှာလည်း အနိုင်ရပါတီနှင့် ယခင် က အတိုက်အခံဖြစ်ခဲ့သော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင် သည့် NLD မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် သည့် ဖွဲ့ စည်း ပုံ အခြေ ခံ ခုံရုံး ကိစ္စ ကို အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။
အရပ်သားအစိုးရ နှင့် လွှတ်တော် ၏ လုပ်ငန်းများလည်ပတ်နေချိန်တွင် နိုင်ငံအနှံ့ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြမှုများ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်းလာသည်။ ယင်းဆန္ဒပြမှုများ၏ နောက်ကွယ်တွင် လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြစေသော လှုံ့ ဆော်သူများ ကလည်း နေရာ/ ဌာန/ နိုင်ငံရေးပါတီ / စသဖြင့် အသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်း ပြောင်ကျကျ တစ်မျိုး ပုန်းလျှိုးကွယ်လျိုးတစ်မျိုး ပါဝင်နေကြသည် ။
ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ် အရ နိုင်ငံရေး ပါတီများအတွက် ပန်းတိုင်မှာ ပြည်သူ့ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်ခွင့် ရရေးအတွက် ကျင်းပသော ရွေးကောက်ပွဲ တိုင်း အနိုင်ရ ရေး ဖြစ်သည် ။ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေး ကျင့်သုံး ဖေါ်ဆောင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ၂၀၁၀ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲ တွင်အနိုင်ရ ထားသော ပြည် ခိုင် ဖြိုး ပါ တီ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင်အနိုင်ရ ရေးအတွက် လက်ရှိ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးအခန်း ကဏ္ဍတွင်ပါ ၀င်သော ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ၊ ပြည်ထောင်စု ဒုတိယ ၀န်ကြီး၊ တိုင်း /ပြည်နယ် ဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် များ နှင့် တိုင်း/ပြည်နယ်ဒေသကြီး ၀န်ကြီး များ အစရှိသော ယန္တရားများ ကို ပြည်သူ လူထုကြည်ညို ချစ်ခင်သော ယန္တရားဖြစ်အောင် ပုံဖေါ် အသက်သွင်းမည့် ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရမည့် အုပ်ချုပ်ရေး အရွေ့စပြီလား ? ? ?
မြေပြင်တွင် စစ်တမ်းကောက်ယူချက်များအရ ရန်ကုန်မြို့၏ လူကြိုက် အများဆုံး ပါတီမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးစီးသည့် အမျိးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် ပါတီ ဖြစ်သည် ။
( ကျွန်ုပ်၏ ထင်မြင်ယူဆချက် သက် သက် သာ ဖြစ် သည် ။ )
ပုဇွန်တောင်မြို့ နယ် ။
ငါတို့အရိုး ၊ စည်းရိုးထိုး၍ ကာသင့်ပါလျှင် ကာရမည်
ဟေ့မြန်မာ ... ဟေ့မြန်မာ
သာကီနွယ်ဖွား ၊ အောင်ဆန်းသားတို့
အနောက်တောင်ရိုး ၊ နယ်တရှိုးမှာ
သင့်ဘိုးသင့်ဘ ၊ သင့်ညီမတို့
သိမ်ဖျင်းစက်ဆုပ် ၊ အမျိုးယုတ်ကြောင့်
အသေဆိုးနဲ့ သေလေပြီ .... ။
မျိုးဖျက်လောက်များ ၊ ဒေါ်လာစားက
ဖအေပထွေး ၊ ကုလားရေးမှာ
သူခိုးလူဟစ် ၊ တို့အပြစ်လို့
တွင်တွင်ဖင်ပိတ် အော်ကြသည် .... ။
အသင်မြန်မာ ၊ မနိုးပါက
ယုတ်ညံ့လူစွာ ၊ ရိုဟင်ဂျာက
သင့်အိမ်သင့်အိုး ၊ သင့်အမျိုးကို
အငြိုးတကြီး ၊ လည်ကိုလှီး၍
သင့်အားမီးတိုက် သတ်လိမ့်မည် .... ။
အနောက်တောင်ရိုး ၊ နယ်တရှိုးက
ဘိုးဘွားအမွေ ၊ ရခိုင်ပြည်ကို
ငါတို့အရိုး ၊ စည်းရိုးထိုး၍
ကာသင့်ပါလျှင် ကာရမည် .... ။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲသို့ ဦးတည်သော အုပ်ချုပ်ရေး အရွေ ...